Ciidamada Qaranka oo Hore Ugu Ruqaansaday Xadka Somaliland La Wadaagto Puntland | Somaliland.Org
December 30, 2008	Laascaanood (Somaliland.org) – Cutubyo ka tirsan ciidamada Qaranka Somalialnd ee ku sugan jiida hore ee Gobolka Sool ayaa gaadhay tuulada Tukaraq oo ilaa 30 km dhinaca bari ka xigta magaalada Laascaanood, halkaasi oo mar fadhiisin u ahayd ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Puntland.
Sida laga baahiyay Idaacadda madaxa banaan ee Horyaal, tallaabadan ciidamada Qaranka ayaa waxa ay la xidhiidhaa sidii loo adkayn lahaa amaanka gobolka Sool, kadib markii ciidanku ay ka war heleen is abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan kooxo ka tirsan maamul goboleedka Puntland, kuwaasi oo sida warku sheegay doonaya in ay ku carqaladeeyaan howsha diwaanglinta codbixiyayaasha oo la filayo in ay ka bilaabanto gobolka Sool horraanta bisha koobaad ee sannadka 2009-ka.
Madaxwayne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa dhawaan uga digay Somaliland inay isku daydo in ay diwaangelinta codbixiyayaasha ka bilawdo gobolka Sool, taas oo uu sheegay in ay keeni karto xaalad nabadgalyo darro iyo isku dhac.
Maamul goboleedka Puntland oo salka ku haya Isir ayaa waxa uu ku doodaa in deegaanada Sool iyo bariga Sanaag oo dadka degan isku hayb yihiin beelaha ku dhaqan beesha Garoowe ka talisa ay ka tirsan yihiin maamulka Puntland. Hase yeeshee, Juquraafi ahaan, waxa deegaanada Sool iyo bariga Sanaag ka mid yihiin dhulkii la odhan jiray Maxmiyaddii Ingiriiska ee Somaliland oo haatan dib ula soo noqotay madax bannaanideedii ay ku tuurtay Muqdisho 1960kii.
Gobolka Sool oo ah gobolkii ugu dambeeyey ayaa diiwaangelintu ka bilaabmaysaa Sabtida soo socota.